‘तनावपूर्ण र अस्वस्थ जीवनशैली मनोरोगको कारक’ « Nepali Digital Newspaper
२४ आश्विन २०७८, आईतवार ०५:१६
सन्दर्भ : विश्वमानसिक स्वास्थ्य दिवस
मनो चिकित्सक डा गिरिराज भन्तना तनावपूर्ण वातावरण घटाउनु पर्ने र स्वस्थ जीवनशैली अपनाउनुपर्ने बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘यसबाट बचाउनका लागि परिवार, समाज र राष्ट्रको भूमिका हुन्छ ।’ बंशाणुगत हिसाबले जोखिममा रहेका व्यक्तिलाई वातावरणीय अनुकूलता मिलाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । ब्युटीफूल माइण्ड इन्स्टिच्युट अफ साइक्याट्री, खैरहनीका अध्यक्षसमेत रहनुभएका डा भन्तना मदिरा लागुऔषध दुर्व्यसनीमा मनोरोगको जोखिम बढी हुने बताउनुहुन्छ ।
रोग लागिहालेमा विशेषज्ञ चिकित्सकसँग समयमा नै उपचार गरेमा निको हुने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘व्यक्तिसँग सुहाउँदा वातावरणीय अनुकूलता मिलाउनुपर्छ । त्यही खालको व्यवहार मिलाउनुपर्छ ।’ लामो समय रोगलाई पालेर नबस्न डा. भन्तना सुझाव दिनुहुन्छ ।
भरतपुर अस्पतालका मानसिक रोग विभागका प्रमुख डा. सुनिल साह विशेषगरी कोरोना महामारीपछि विभिन्न समस्या लिएर बिरामी आउने गरेको बताउनुहुन्छ । सङ्क्रमणका समयमा नियमित चेक नगरेका र औषधि प्रयोग नगरेका पूर्ववत् अवस्थामा जटिल समस्या लिएर आउने गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ । महामारीपछि पेशा तथा रोजगारी गुमाएर, लामो समय परिवार एकै ठाउँमा बस्दा झैझगडा भएर पनि समस्या आएको उहाँको बुझाइ छ । मध्यम र न्यून आय भएका देशमा मानसिक समस्या बढेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘जनचेतनाको कमी छ । मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिलाई उपचार पहुँच छैन ।’
मनोरोग विशेषज्ञ डा. सिर्जना भुर्तेल स्वस्थ जीवनशैली अपनाउनसके धेरै मनोरोग नियन्त्रण गर्न सकिने बताउनुहुन्छ । सामान्य स्वस्थ जीवनशैली अपनाउने, शारीरिक श्रम र व्यापार गर्ने, आफ्ना कुरा अरुलाई बाँड्ने (शेयर गर्ने) गरियो भने धेरैजसो मनोरोग नियन्त्रण गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘कुलतमा लागेमा, कसैको आनीबानी र व्यवहार परिवर्तन भएमा तुरुन्त चिकित्सकको परामर्श लिनुपर्छ ।’
सामान्य अवस्थामा मानिसको सोच, विचार र व्यवहारमा आउने परिवर्तनलाई मनोरोग भनिने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘निराश हुनु, राति निन्द्रा नपर्नु, खाना मन नलाग्नु, आत्महत्याको सोच आउनु जस्तो लक्षण मनोरोगका हुन् ।’ छड्पटी हुनु, जाँगर नलाग्नु, जिउ पोल्नु, जोर्नी पोल्नु, चिन्ता बढ्नु तर परीक्षण गर्दा केही रोग नदेखिनुलाई मनोरोग भनिने गरेको उहाँको भनाइ छ ।